November 2011 ~ ကိုစောဂျက်
11:52 Ko Saw2comments
Windows7လိုချင်တယ် ဆိုလို တင်ပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ OS ဖိုင့်ကို downloads သာ လုပ်လိုက်ပါ..
XP, but look forward eagerly to try to make out what is to come. Is that, for now, is known as Microsoft Windows 7.
Now in Windows has changed names and logos above. This was the Longhorn logo.Windows7is the next major version of this series of operating systems, which will aim to replace the current Windows Vista. The information itself is so preliminary, do not even haveaconfirmed name. Originally, the codename of this version of Windows was Vienna, but was renamed (if temporarily) to Windows 7. Remember that this has happened before, in the case of Windows Vista, Longhorn code was his name, and XP was Whistler begning of something new.
One thing is fact that every timeajournalistic medium has approached someone at Microsoft and asked about Windows 7, as if inasudden attack of amnesia. Instead of predicting or mention some noteworthy feature of this OS, they just mention the accomplishments of Windows Vista. Even the Bill Gates has beenalittle cryptic about it, but it was he who gave more answers when talking about the next Windows. Information outlet's own mouth Gates indicated that Windows7would be much more friendly when transferring data from one computer user to another, and even the possibility of having two computers in perfect sync with each other. He also mentioned something that we are chiefly concerned, and performance. Gates words were taken literally to mean that Windows7would seek to consume less power and less memory at the same time more efficient. Sounds too good, considering that there is hardlyaMilestone of Windows 7, its beta would emerge in the second half of 2009, one of the best.
But still, there are some things that indicateadifferent approach with Windows 7. This time you can download windows7in many version that new version links and name are below.
To Download Free Windows7In Various Version Links Are Given Below;
Windows7Professional Direct Download Links:
32-bit Windows7Professional x86: Download Here.
64-bit Windows7Professional x64: Download Here.
Windows7Professional Direct Download Links In ISO:
Orbit 4.1 နဲ့ Videos,Music,MP3downloads လုပ်မယ်
09:51 Ko Saw No comments
ဒါက Orbit 4.1 ပါ။ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ သူက internet download manager လိုပဲ သုံးရတာ ကောင်းပါတယ်။ Free ပေးသုံးပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ downloads လုပ်လိုက်ပါ။ အသုံးပြုနည်းကို http://www.orbitdownloader.com/NewFeatures.htm
အထက်ပါ လင့်မှာ သွားရောက်ကြည်ရူနိုင်ပါတယ်။
Current version : 4.1.0.2 No adware! No spyware!
ဒီမှာလည်း downloads လုပ်လိုရပါတယ်
All Office Converter Pro v5.1 / Platinum 6.1
09:23 Ko Saw No comments
အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ All Office Converter Pro v5.1 နဲ့ Platinum 6.1 နှစ်မျိုးလုံးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ All Office Converter ဆိုတဲ့ အတိုင်း လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းလည်း များပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads ယူလိုက်ပါ။ 12.MB ပဲရှိပါတယ်။
08:58 Ko Saw No comments
ဒါကတော့ Foxit PDFCreator ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။ Word ဖိုင်တွေ Excel ဖိုင်တွေကို PDF ဖိုင်အဖြစ် ပြောင်းချင်တဲ့အခါ သုံးရပါတယ်။ Foxit PDF ဆော့ဝဲလ်ကို သွင်းထားလိုက်ရင် သူက ကိုယ်ရဲ့ Print out မှာ ပေါ်နေပါမယ်။ ကိုယ် ပြောင်းချင်တဲ့ ဖိုင်ကို Printer မှာ Foxit PDF ကို ရွေးပြီး ကိုယ် Save လုပ်ချင်တဲ့ နေရာညွှန်ပြပြီး Print ပေးလိုက်ရုံနဲ့ PDF ဖိုင်ကို ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။1.MB တောင် မပြည့်ပါဘူး။ အလိုရှိသူ များ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads လုပ်လိုက်ပါ။
Portable Bus Driver game
06:35 Ko Saw No comments
ဒါကတော့ Portable Bus Driver ပါ။ ကစားလို့ ကောင်းပါတယ်။ အဆင့်တွေ အများကြီးပါပါတယ်။ ကားမောင်းတတ်ချင်သူများ ဒီဂိမ်းလေးကို အရင် ကစားကြည်ကြပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကားတိုက်တာ မှောက်တာဆိုရင်လည်း အပြင်မှာ အရေးယူမခံရလို့ပါ။ ဒီဂိမ်းလေးက မြို့ထဲမှာ လူတွေကို bus car လေးနဲ့ လိုက်ပြီး ပို့ဆောင်ပေးရတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ။ 64.MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
downloads links 1 (mediafire)
downloads links2(fileserve )
downloads links3(rapidshare)
Windows XP _ SP3 2011 v11.02
13:53 Ko Saw No comments
windows xp ကို တောင်းဆိုထားလို့ နောက်ထပ် xp တစ်မျိုးကို ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ xp ကို သုံးကြပါ။ ကျွန်တော်လည်း xp ချစ်သူပါ။ ;))
ဖိုင်း ၄ ဖိုင်ခွဲပြီး တင်ထားပါတယ်။ အောက်မှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
သူမှာ ပါတာတွေကို အောက်မှာ ကြည်လိုက်ပါ။
Windows XP SP3 Fire 2011 Full Version
13:24 Ko Saw2comments
windows xp လိုချင်တယ် ဆိုလို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါက Windows XP SP3 Fire 2011 Full Version ပါ။ 700.MB နီးပါးရှိပါတယ်။ downloads ဆွဲပြီးရင် CD ခွေနဲ့ဘန်းပြီး windows တင်လိုက်ပါ။ ဖိုင့် ၄ ဖိုင့်ခွဲတင်ထားပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ ။ downloads လုပ်ရင် Password မေးရင် idws ဆိုပြီး ပေးလိုက်ပါ။) အလိုရှိသူများ အောက်က links မှာ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
Windows XP SP3 Fire 2011 part 1(200mb)
Windows XP SP3 Fire 2011 part2(200mb)
Windows XP SP3 Fire 2011 part3(200mb)
Windows XP SP3 Fire 2011 part4(85,96)
Java. Games .240x320 touch .screen (2011) mobile ဖုန်း အတွက် gamesများ
18:38 Ko Saw2comments
ကျွန်တော် ဘော်ဒါတစ်ယောက်က ကျွန်တော်ကို တွေ့တိုင်း သူဖုန်းထဲမှာ games ထည့်ပေးပါဆိုပြီး အမြဲတမ်း တောင်းဆိုတတ်တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ကောင်းရှာပါတယ်။ google အားကိုယ်နဲ့ ရှာပြီး ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူဖုန်းနဲ့ သိပ်ပြီးမလိုက်ပါဘူး။ အချိန်ကလည်း သိပ်မရတော့ games တစ်ခု နှစ်ခု လောက်ပဲ ထည့်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မှ ထည့်ပေးမယ် နောက်မှ ထည့်ပေးမယ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ပီပီ ကတိတွေ ဇွတ်ပေးပြီး မထည့်ပေးတာ ၆ လလောက်ရှိနေပါပြီး။ ;))
အခုတင်ပေးတဲ့ Java Games 240x320 touch screen (2011) ကSAMSUNG, NOKIA, LG, I mobile စတဲ့ mobile
ဖုန်းတော်တော်များများနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ games အမျိုးအစားကလည်း 200 နီးပါးလောက်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဖုန်းနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ဂိမ်းက တစ်ရာနီးပါးလောက်ရှိမှာပါ။ ကျွန်တော်လက်တွေ့ Phone တွေမှာ ထည့်ပြီး စမ်းပြီးပါပြီး။ 57.MB ပဲရှိပါတယ်။ TRUE TOUCH ဖိုင့်နဲ့JAM TOUCH ထဲမှာ ကိုယ်ကစားချင်တဲ့ ဂိမ်းဖိုင့်တွေကို copy ကူပြီး ဖုန်း Memory Cards ထဲ New folder တစ်ခု တည်ဆောင်ပြီး paste ချလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီဖိုင့်ကို သွားပြီး ကိုယ်ကစားချင်တဲ့ ဂိမ်းဖိုင့်ကို open လုပ် Run ပြီးကစားရုံပါပဲ။ အလိုရှိသူများ အောက်မှ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads ဆွဲလိုက်ကြပါ။
downloads links 1(mediafire)
downloads links2(ifile)
deep freeze standard7နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ကွန်ပြုတာကို ကာကွယ်မယ်
13:37 Ko Saw No comments
ဒါကတော့ deep freeze standard7ပါ။ internet cafe တွေမှာ deep freeze ကို တော်တော်လေးအသုံးများကြပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ windows ပုံအမှန်တိုင်း ဖြစ်နေဖို့ Deep Freeze ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။သူအကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ကို အောက်မှာ ရေးထားပေးပါတယ်။ Serial number လည် ဖိုင့်ထဲမှာ ထည့်ထားပေးပါတယ်။ 5.MB ပဲရှိပါတယ်။ အလိုရှိသူများ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ links ကနေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
Deep Freeze အသုံးပြုနည်း
18:32 Ko Saw4comments
မြန်မာစာ လက်ကွက်လေ့ကျင့်လိုသူများ အတွက် Myanmar Typing နောက်တစ်မျိုးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ win sittway / Wwin Burmeses / win - inwa / Win Amarapura / CE ROYAL နဲ့ CE Collection စတဲ့ Font တွေနဲ့ လေ့ကျင့်လိုရပါတယ်။ Ko Myat Khaing ဖန်းတီးထားတာလို ထင်ပါတယ်။Myanmar Typing.exe ကို ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး လေ့ကျင့်ရုံပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်လိုပါ လေကျင့်လိုရပါတယ်။ 1.MB ကျော်ကျော်ပဲရှိပါတယ်။ မြန်မာဖောင့် အခက်အခဲရှိရင် ဒီပိုစ့်မှာ သွားပြီး downloads သွားဆွဲလိုက်ပါ။ နောက်ထပ် မြန်မာဖောင့် အားလုံးနီးပါးကို တင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ တောင်းထားတာလဲ ကြာပါပြီး။ တင်ပေးပါမယ်။
အလိုရှိသူများ အောက်က အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
downloads links (mediafire)
format factory 3.0 converter
17:56 Ko Saw No comments
1 / 11 /2011
ဒါက format factory 3.0 ပါ။ ကျွန်တော်မှာ တောင်းထားတာ ၁ လကျော်နေပါပြီး။ ခုမှပဲ တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ မအားတာနဲ့ မေ့နေတာနဲ့ ခုမှ သတိရလို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လူသုံးများတဲ့ converter အမျိုးအစားတစ်ခုပါပဲ။ သူက key မလိုသလို ဘာသာစကား ၅၆ ကို ထည့်သွင်းထားတဲ့ အတွက် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာဘာသာတော့ မပါသေးပါဘူး ;)) အလိုရှိသူများ အောက်ကအဆင်ပြေတဲ့ နေရာကနေ downloads ဆွဲလိုက်ပါ။
format factory downloads links 1
format factory downloads links 2
သူ converter လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဟာလေးတွေကို အောက်မှာ ကြည်ရူနိုင်ပါတယ်။
15:18 Ko Saw 1 comment
X-Men game ကစားချင်တယ်ဆိုလို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာ သူအချက်အလက်ကို ကြည်ပြီးမှ downloads ဆွဲပြီး ကစားပါ။ file size : 190 Mb ရှိပါတယ်။
Screen shoot downloads links က အောက်မှာပါ။
Java. Games .240x320 touch .screen (2011) mobile ဖ...
deep freeze standard7နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ကွန်ပြုတာကို က...
Myanmar Typing နဲ့ မြန်မာစာ လက်ကွက် ကျင့်လိုသူများ...